ခုနစ်ရက်ထိတိုင် သီတင်းတစ်ပတ်စာ ဒေသစံတော်ချိန်ကိုက် နာရီများ အာလုံးလိုလို အဆင်ပြေစွာ လည်ပတ်ခဲ့ပြီးနောက် တနင်္လာနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ၁၅:၃၅၌ စင်္ကာပူမြို့မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ထွက်ခွာခဲ့သော Y5 234 လေယဉ်သည် ဦးတည်ရာမြို့သို့ ဆိုက်ရောက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ခရီးသည်များနှင့်အတူ အဆင်မပြေမှု အချို့ကိုပါ လေယာဉ်ပေါ်မှ လှဲကျင်းသွန်ချလိုက်သည်။ ရှေးဦးစွာ လေယာဉ်မယ်က ခရီးသည်တို့ သိရမည့် အချက်များကို
အင်္ဂလိပ် မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော စာရွက်များကို တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက် တစ်ရွက်ပြီးတစ်ရွက် ဖတ်ကြားကြေငြာသည်။ မန္တလေးသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာမည့် ခရီးသည်များ နောက်ဆုံးမှ ဆင်းရန်ကြေငြာချက် ပါဝင်သည်ဖြစ်၍ စောင့်ရမည်။ ဆက်လက်ထွက်ခွာမည့် ရန်ကုန်-မန္တလေး လေယဉ်မှာ စင်္ကာပူ-ရန်ကုန် လေယာဉ်ပင် ဖြစ်သော်လည်း ခရီးသည်များ အားလုံးဆင်းပေးရမည်။ လေယဉ်ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဟု ဆို၏။ စနစ်ကျပုံရသည်။ လေယာဉ်မှ ဆင်း၍ လေယာဉ်ကူးပြောင်းဂိတ်သို့ သွားရမည်။ ဆင်းသက်ထားသော လေယာဉ်နှင့် လေယာဉ်ကူပြောင်း စောင့်ဆိုင်းဂိတ် မဝေးသော်လည်း ကားနှင့် ပို့ပေးသည်။ စနစ် မဆိုးပြန်သေး။ ကြိုပို့ကားမှာ ရန်ကုန်ဂိတ်ဆုံး ခရီးသည်များကို အရင်ပို့သည်။ မန္တလေးသို့ဆက်မည့် ခရီးသည်များ စောင့်ရသေးသည်။
သည်းခံရသည့် စနစ်ဖြစ်သော်လည်း စောင့်ရချိန် မကြာလှ၍ တော်သေးသည်။ စောင့်ဆိုင်းဂိတ်သို့ ကားရောက်၍ ဆင်းသည်နှင့် အဆင်မပြေမှု ရှိနေသည်။ စောင့်ဆိုင်းဂိတ် သော့ပိတ်ထားသည်ဖြစ်၍ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ဖြစ်သွားသည်။ အလွန်အကျွံ အရေးကြီးသည်ဟုကား ၀န်ထမ်းတို့က ယူဆကြဟန် မတူပေ။ သော့ (သို့) သော့ကိုင်သူကို ရှာကြသည်။ ဂိတ်မှားခြင်းလေလော။ ကူးပြောင်းစောင့်ဆိုင်းဂိတ် မည်မျှ ရှိသည် မသိပေ။ အခြေအနေကို အတိအကျ မသိရသော်လည်း ဂိတ်မပွင့်သည်မှာ သေချာ၏။ ဘယ်လိုမှ မပွင့်တော့ပေ။ နောက်ဆုံး၌ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်က “ဘိုးဒင်းဘက် ပို့လိုက်ကွာ”ဟု ပြောသည်။ တိုက်ရိုက်ထွက် ခရီးသည်များ ရှိရာသို့ ပို့ရန် ညွှန်ကြားသည်။ ကူးပြောင်းခရီးသည်များသည် ထွက်ခွာမည့် ခရီးသည်များနှင့်အတူ စောင့်ရမည်။ မန္တလေး ခရီးသည်များ ကားပေါ်သို့ ပြန်တက်ကြရန် ကြေငြာသည်။ ခရီးသည် ဆယ်ရောက်သာ ရှိသည်ဖြစ်၍ သတင်းပေးရန် လွယ်ကူသည်။ စင်္ကာပူမှ တရုတ်လင်မယားတို့ နားမလည်၍ ကားဆီသို့ လက်ညှိုးထိုးလျက်
ကျောကိုတွန်းကာ ကားပေါ်တင်ပေးသည်။ ခရီးသည်များ ငြိမ်ဝပ်စေလိုဟန် တူ၏။ ကူးပြောင်းခရီးသည်များ မိနစ်လေးဆယ်ခန့် စောင့်ရမည် ဆိုသောကြောင့် ငေးရင်းမောရင်း အချိန်ဖြုန်းရန် ပြင်ဆင်ကြသည်။ သို့သော် ငါးမိနစ်ခန့်ကြာသော် ကူးပြောင်းခရီးသည်များကို ပြန်ခေါ်ပြန်သည်။ ကူးပြောင်းခရီးသည်များ “ဘိုးဒင်းဂိတ်”၌ နေရန် အဆင်ပြေဟန် မတူပြန်ပေ။ အပြေးအလွှား လိုက်လံ၍ လက်တို့ကာ သတင်းပေးရသည်။ လူဆယ်ရောက်ကို ပြန်စုရာ တစ်ယောက်လိုနေသဖြင့် လူသားစွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ အမောတကော လိုက်ရှာကြပြန်သည်။ လူစုံသည်နှင့် ကြိုပို့ကား ပြန်ထွက်သည်။ “လေယာဉ်ထဲ ထည့်ထားလိုက်ကွာ။” လေယာဉ် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ မပြီးဆုံးသေးလျှင် ကားပေါ်မှာပင် ထိုင်စောင့်ရမည်ဟု ထင်မိလိုက်သော်လည်း စောင့်ရတော့မည် မဟုတ်ပေ။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်သားများ လေယာဉ်ပေါ်မှ ပြန်ဆင်းလာသည်ကို ကားပေါ်မှ လှမ်းမြင်လိုက်ရသည်။ မန္တလေး ခရီးသည်များ လေယာဉ်ထဲသို့ စောစီးစွာ ပြန်ဝင်ရန် ရှိသောကြောင့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်းများ မပြီးသေးမီ သန့်ရှင်းရေး လုပ်သားတို့ မောင်းထုတ်ခံလိုက်ကြရဟန်တူ၏။ သန့်ရှင်းရေး မပြီးသေးသည်မှာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း
သဲလွန်စ ပြနေသော သိကြားလုံးအခွံ တစ်ချို့ကို သတိထားမိသည်။ နောက်ဆုံး၌ လေယဉ်ထွက်ခွာရန် တံခါးပိတ်လိုက်ပြီးနောက် တံခါးပြန်ဖွင့်ရသည်။ လူကြုံ ပစ္စည်းကမ်းလိုက်စရာ ရှိသေးသည်။ ခဏစောင့်ရမည်။ အမှန်ပင် ခဏသာ ကြာသည်။
ထို့နောက် ထွက်ခွာသည်။ လေယာဉ်ဖြစ်သောကြောင့် ရထားကဲ့သို့ ဥသြဆွဲစရာ မလိုပေ။ ဂျုံးဂျုံး ဂျက်ဂျက် . . . . .။ တံတားဦးလေဆိပ် ဆင်းကာနီးသောခါ လေယာဉ်မယ်က သိမှတ်စရာများကို ဖတ်ကြားကြေငြာပြန်သည်။ စင်္ကာပူမှ ထွက်ခွာလာခဲ့သော ခရီးသည်များ လ၀က အရာရှိတို့ထံ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အစစ်ခံရမည်ဖြစ်၍ ရန်ကုန်-မန္တလေး ခရီးသည်များ ဆင်းပြီးချိန်ထိ စောင့်ဆိုင်းကြရန် ကြေငြာသည်။ ဆက်လက်ထွက်ခွာကြရာ လ၀က အရာရှိများက ရဟန်းတော်များကို ဦးစားပေး၍ အမြန်စစ်ပေးသည်။ ခရီးသည် သိပ်မများသော်လည်း ကောင်တာခွဲ၍ စစ်ဆေးသောအခါ ရုံးတံဆိပ်တုံး မလုံမလောက် ဖြစ်နေဟန် တူ၏။ ဤမှာဘက် ကောင်တာမှ အရာရှိသည်“တုံးရပြီ”ဟု ဟစ်အော်ရင်း တံဆိပ်တုံးကို ဟိုမှာဘက် ကောင်တာသို့ ကြင်နာစွာ လှမ်းပေးသည်။ တံဆိပ်တုံးကို မျှဝေသုံးစွဲကြ၏။ Caring and Sharingဟု ဘာသာပြန်ရမည် ဖြစ်သည်။ ခရီးဆောင်အိပ်များ ယူရန် ရှိသေးသည်။ ပစ္စည်းများ သည်ဆောင်လာသော စက်ခါးပတ် လည်နေစဉ် ခါးပတ်ပေါ်မှ အိပ်များကို ရှာရသည်။ လေဆိပ်ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ကလည်း ကြင်နာစွာ ကူညီသည်။ “tag ကလေးတွေ ထားခဲ့ပြီး အပြင်က အေးအေးဆေးဆေး စောင့်နေပါဘုရား။ တပည့်တော် ရွေးပြီး ယူလာပေးပါ့မယ် ဘုရား။” “ဟုတ်ပါ့မလား။ ငါ့တို့တောင် ကိုယ့်အိပ်ကိုယ် ရှာရတာ မလွယ်ဘူး . . .။” “အဆင်ပြေပါတယ် ဘုရား။ tagမှာပါတဲ့ နံပါတ်နဲ့ တိုက်ပြီး ယူခဲ့ပါမယ် ဘုရား။ ကြွ ကြွ . . .။” ငြင်းရန် မသင့်တော့ပေ။ အပြင်မှ စောင့်နေလိုက်ကြသည်။ စောင့်ရသည်မှာ ကြာမြင့်လှသည်။ မျှော်လင့်ထားသည်ထက် နာရီဝက်ခန့် ပိုကြာသည်အထိ အိပ်များရောက်မလာသေး၍ မစောင့်နိုင်တော့သဖြင့် အတွင်းသို့ ပြန်ဝင်လိုက်သည်။ မည်သူမျှ မတားမြစ်ပေ။ ကူညီပါရစေဟု တောင်းပန်သည့် ၀န်ထမ်းသည် အိပ်ကို ရှာနေဆဲ ဖြစ်သည်။ အိပ် တွေ့ပါပြီ။ ခါးပတ်ပေါ်မှာ အပတ်ရေမည်မျှ လည်ခဲ့ရသည် မသိပေ။ ကားကြိုဖြင့် တံတားဦးမှ မန္တလေးသို့ ခရီးဆက်ကြပြန်သည်။ မန္တလေး ခရီးသည် ရဟန်းနှစ်ပါးတို့ ပြန်မည့်နေရာများမှာ မြို့၏ အရှေ့ထိပ်နှင့် အနောက်ထိပ် တစ်ခြားစီဖြစ်နေပြီး အနောက်သို့ အရင်သွားသည်။ အနောက်ကျောင်း ရောက်သည်နှင့် အချိန်အနည်းငယ် အတွင်း၌ ကိုးနာရီ ထိုးသည်ဖြစ်၍
ညမထွက်ရအမိန့် ရှိနေသေးသဖြင့် အရှေ့ကျောင်းသို့ သွားချိန်မရတော့ပေ။ အရှေ့ကျောင်းနေ ရဟန်းသည် အနောက်ကျောင်းမှာပင် အာဂန္တုက အဖြစ် တစ်ညကုန်ရန် စီစဉ်ရတော့သည်။ အနောက်ကျောင်း ရဟန်းမှာ အိပ်ရာမှန်ဖြစ်၍ တစ်ညတာ အဆင်ပြေမည် ဖြစ်သော်လည်း အာဂန္တုက ရဟန်းအတွက် အိပ်ရာနေရာ အသားမကျမှု အခက်အခဲ ရှိနိုင်သည်။ အာဂန္တုရဟန်း၏ အိပ်တစ်ဝက် နိုးတစ်ဝက် ညချမ်းသည် ကျောင်းအနီးရှိ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်မှ အမူးသမား၏ ဆဲသံဆူသံ စိန်ခေါ်သံတို့ကြောင့် စိုစိုစည်စည် ရှိနေ၏။ အာဂန္တုက ရဟန်းသည် ညမထွက်ရအမိန့်
ထုတ်ပြန်သကဲ့သို့ ညမဆူရအမိန့် ထုတ်ပြန်လျှင် ကောင်းလိမ့်မည်ဟု စဉ်းစားရင်း
(30-6-2014 to 7-7-2014) ဆက်ဖတ်ရန်
ယသောဓရာကို နှုတ်ဆက်ပြီးနောက် သာဝကကြီးနှစ်ပါး ခြံရံလျက် ဆွေတော်မျိုးတော်တို့
ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းထားသည့် နိဂြောဓာရုံကျောင်းတော်သို့ ပြန်ကြွတော်မူ၏။ ယသောဓရာသည်
နန်းဆောင်လေသာပြတင်းပေါက်၌ ရပ်လျက် နန်းတော်မှ ထွက်ခွာတော်မူသည့် ဘုရားရှင်ကို
ငေးကြည့်နေ၏။ သူ့၏ အနီး၌ ရှိနေသော ရာဟုလာကိုပင် သတိမထားမိတော့ပေ။
သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးနှင့် မှူးမတ်တို့ ဘုရားရှင်ကို ဗဟိုနန်းမဆောင်အထိ လိုက်ပို့ကြပြီး
ထိုနေရာ၌ နေရစ်ခဲ့ကြသည်ကို ယသောဓရာ မြင်နေရ၏။ အတည်ငြိမ်ဆုံး အအေးချမ်းဆုံး
အမူအရာဖြင့် ပြန်ကြွတော် မူနေသည့် ဘုရားရှင်ကိုလည်း မြင်နေရ၏။
တိုက်ခတ်လိုက်သည်။ နေမင်းသည် အနောက်ကောင်းကင်၌ ကျဝင်လျက် ရှိနေ၏။
ထိုအခိုက်အတန့်အတွင်း လမ်းများပေါ်၌ လူသူကင်းဆိတ်နေ၏။
လက်တော်ကို ဆွဲကိုင်လျက် ဘုရားရှင်၏ နောက်တော်သို့ လိုက်ပါနေသည့် ကလေးတစ်ယောက်ကို
ယသောဓရာ ရုတ်တရက် လှမ်းမြင်လိုက်ရ၏။ ချက်ချင်းပင် နောက်ပြန်လှည့်၍ ကြည့်လိုက်သည်။
ရာဟုလာ မရှိတော့ပေ။ ယသောဓရာ တုန်လှုပ်ချောက်ချားသွား၏။ အခြွေအရံ အစေခံများကို
ဟစ်အော်မြည်တွန်ရင်း နန်းဆောင်အပေါ်ထပ် တစ်ခုလုံးနှံ့အောင် ရာဟုလာကို လိုက်ရှာ၏။
နန်းဆောင်အပေါ်ထပ်၌လည်းကောင်း အောက်ထပ်၌လည်းကောင်း ရာဟုလာကို မတွေ့ရပေ။
နန်းတော်ဝင်းထဲ၌လည်း ရာဟုလာ မရှိပေ။ ယသောဓရာသည် နန်းဆောင်ပေါ် ပြန်တက်ပြီး
ပြတင်းပေါက်မှနေ၍ ကြည့်ပြန်၏။ ဘုရားရှင်၏ လက်တော်ကို ဆွဲကိုင်လျက် ဘုရားရှင်၏
နောက်တော်သို့ လိုက်ပါနေသော ကလေးမှာ ရာဟုလာပင်ဖြစ်ကြောင်း တပ်အပ်သေချာ သိလိုက်သည်။
ချက်ချင်းပင် ကျွန်မခုဇ္ဇုတ္တရာကို ခေါ်၍ သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးထံသို့ ပြေးလေ၏။
ရှေ့တော်မှောက်၌ စကားမပြောနိုင်ဘဲ ရှိနေ၏။ ယသောဓရာ ပူရပြန်လေပြီ။
“သမီးတော် . . .။
ဘာဖြစ်တာလဲ”ဟု မင်းကြီးက အလန့်တကြား မေး၏။
“ခမည်းတော် . . .
ခမည်းတော် . . . ရာဟုလာ မရှိတော့ဘူး။”
ရာဟုလာ ဘာဖြစ်တာလဲ။ မတော်တဆ တစ်ခုခု ဖြစ်သလား။”
“ခမည်းတော် . . .။
ရာဟုလာက သမီးတော် မသိလိုက်ခင်မှာ ဘုရားရှင်နောက် လိုက်သွားတာ . . .။ ခု သူ့အဖေရဲ့
လက်ကိုဆွဲပြီး နောက်ကလိုက်နေတယ်။ ခမည်းတော် . . . ရာဟုလာကို ပြန်ခေါ်နိုင်တာ
ခမည်းတော် တစ်ယောက်ပဲ ရှိပါတယ် ဘုရား . . .။”
ရာဟုလာကို ကျောင်းတော်သို့ခေါ်သွားပြီး ခေါင်းတုံးတုံး သင်္ကန်းဝတ်စေကာ
ရှင်ပြုပေးလိုက်နိုင်သည်ဟု တွေးမိပြီး သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီး ရုတ်ချည်းပင် စိုးရိမ်စိတ်
ဖြစ်မိ၏။ ဤသို့ တွေးမိပြီးနောက် အရွယ်ကြီးရင့်ပြီဖြစ်သော မင်းကြီးသည် သောကဖြင့်
ရူးသွပ်သည်ဖြစ်၍ သူ၏ ခန္ဓာကိုယ် အခြေအနေကို သတိမမူမိတော့ဘဲ နန်းရှေ့ကွင်းပြင်သို့
ထွက်သွား၏။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှအမိန့်မပေးဘဲ တောင်ဝှေးထောက်လျက် တစ်ယောက်တည်း
မြင်လိုက်ရသူတို့ အံ့သြတုန်လှုပ်သွားကြ၏။ ဘယ်တုန်းကမှ မင်းကြီးတစ်ပါးတည်း
လမ်းပေါ်ထွက်မလျှောက်သည်ကို တိုင်းသူပြည်သားများ သိထားပြီး ဖြစ်ကြ၏။ သောကသည်
မင်းကြီးသည် ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်နိုင်ဘဲ ဒယီးဒယိုင် ပြေးသွားရင်း အမောတကော
ဖြစ်နေ၏။ နောက်မှ လိုက်လာသည့် ကာဠုဒါယီ သူ့ကို မမီသေးခင်မှာပင် မင်းကြီး ဆက်၍
မသွားနိုင်တော့ပေ။ ရပ်တန့်၍ အမောဖြေနေရ၏။ ကာဠုဒါယီသည် မင်းကြီး၏ အနီးသို့
ရောက်သောအခါ မြင်းပေါ်မှ ဆင်းလိုက်ပြီး မင်းကြီးကို တိုးလျှိုးတောင်းပန်၍
“အို . . . ကာဠုဒါယီ .
. . ကာဠုဒါယီရယ် . . .။ ငါ့လောက် ကံဆိုးတဲ့ အဖေမျိုး ဒီ ကပိလ၀တ်မှာ ရှိမယ်
မထင်ပါဘူး . . .။ ငါ့စိတ် နာကျင်လှပြီ။ ငါ့စိတ်ဟာ တုတ်နဲ့ထိုးဆွခံရတဲ့ အနာလို၊
ခဲနဲ့ ပစ်ပေါက်ခံရတဲ့ အနာလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ကာဠုဒါယီ . . . ငါ့မှာ မျှော်လက်ချက်
တစ်ခုပဲ ရှိတာ . . .။ အဲဒီ မျှော်လင့်ချက်သာ ဆုံးသွားရင်တော့ ငါလည်း သွားပါပြီ။”
“အရှင်မင်းကြီး . . .
ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီလောက်ထိလည်း စိုးရိမ်ကြောင့်ကြတော် မမူပါနဲ့ ဘုရား။ ရာဟုလာဟာ
ကျောင်းတော်မှာ မင်းသားဝတ်လေးနဲ့ ရှိနေမယ် ထင်ပါတယ် ဘုရား။ မင်းသားလေးဟာ
သွေးသားဆက်စပ်မှုနဲ့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကြောင့် ဘုရားရှင်နောက် လိုက်သွားတာ
ဖြစ်မှာပါ ဘုရား။ သနားကရုဏာပြည့်ဝပြီး အနှောင်အတွယ်ကင်းတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့
မျက်နှာတော်ကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် ဖူးတွေ့လိုက်ရသူဟာ ဘုရားရှင်ကို
ကျောမခိုင်းနိုင်တော့ပါဘူး ဘုရား”ဟု ကာဠုဒါယီက ဖြေသိမ့် လျှောက်ထား၏။
“ကာဠုဒါယီ . . . ငါ
တော်တော်ကြီးကို စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေတာ။ ငါ့သားတော်ဘုရား မွေးလာကတည်းက ရခဲ့တဲ့
စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုဟာ ငါ့ကို နှိပ်စက်နေတယ်။ သုံးဆယ့်ခုနစ်နှစ်လုံးလုံး ငါ
ဆင်းရဲပင်ပန်းလာခဲ့တာ။ ငါ့သားတော်က သူ့သာသနာအတွက်ပဲ သူ စဉ်းစာတယ်၊
ငါ့နေပြည်တော်အတွက် မစဉ်းစားဘူးလို့ ငါ ယူဆတယ်။”
မဟုတ်ပါဘူး . . . အရှင်မင်းကြီး . . .။ မင်းသားလေး သာသနာ့ဘောင် ၀င်ရောက်ဖို့
ဘုရားရှင်က ဖိအားပေးလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျိုးဖြင့် နည်းနည်းလေးမှ
မတွေးမိပါဘုရား။ ဘုရားရှင်ဟာ သားသမီးနဲ့ ဇနီးမယားတွေ စိုးရိမ်ပူဆွေးရအောင်
အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားတွေကို ရဟန်းပြုပေးတဲ့သူ မဟုတ်ပါဘုရား။ ဘုရားရှင်ဟာ
အားလုံးအပေါ်မှာ တရားမျှတပါတယ် ဘုရား . . .။”
“မဟုတ်ဘူး။ ကာဠုဒါယီ .
. . ရာဟုလာက သူ့သားဖြစ်နေတော့ ကလေးကို သူ ရှင်ပြုပေးလိုက်လိမ့်မယ်လို့ ငါ ထင်တယ်။
ကာဠုဒါယီ . . .။ မြင်းကို မြန်မြန်မောင်းစမ်းပါ။”ဟု မင်းကြီးက အော်၍ အမိန့်ပေး၏။
ကာဠုဒါယီသည် မြင်းပေါ်မှ ဆင်းလိုက်ပြီး မင်းကြီးကို မြင်းပေါ်မှ ချပေး၏။ ထို့နောက်
မင်းကြီးသည် တောင်ဝှေးထောက်လျက် ကျောင်းတော်ဆီသို့ ဒယီးဒယိုင် လျှောက်သွားလေသည်။
ကျောင်းတော်အတွင်း၌ ရှိနေ၏။ သူ့အတွက် သီးခြား ပြင်ဆင်ထားသည့် ညောင်းစောင်း၌
နေ့သန့်စင်တော်မူနေ၏။ ရာဟုလာကိုကား မတွေ့ရပေ။ မင်းကြီး ထိတ်လန့်သွား၏။ အလန့်တကြား
မြေးတော်လေး ရာဟုလာ ဘယ်မှာလဲ။”
ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ကြမ်းပြင်ပေါ် လှဲချလိုက်၏။
ရာဟုလာ ရှိပါတယ်။”ဟု ဘုရားရှင်က ပြန်လည် ဖြေကြားတော်မူ၏။
“အို . . .
သားတော်ဘုရား။ ဘာဖြစ်လို့များ ခမည်းတော်ရဲ့ ဒဏ်ရာဟောင်းကို ပိုဆိုးအောင် ဆွရတာလဲ။ အို
. . . နတ်ဒေ၀ါတို့ . . .။ ဒီအဖိုးကြီးကို နှစ်သိမ့်နိုင်မယ့်အရာ
မရှိတော့ဘူးလား။ ခမည်းတော်ဟာ သားတော် ရဟန်းပြုလေမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့
နှစ်ဆယ့်ကိုးနှစ်လုံးလုံး စိတ်ဒဏ်ရာ ရခဲ့တာပါ။ သားတော် ကပိလ၀တ် ပြန်မလာမချင်း
သောကသည်ကြီး ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ သားတော်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ
တွေ့မြင်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက် စိတ် အနယ်ထိုင်အောင် ကြိုးစားနေရတုန်းပါ။ ခမည်းတော်ရဲ့
ဖခင်မေတ္တာဟာ ခမည်းတော်ရဲ့ အသားစိုင်ထဲ၊ သွေးကြောတွေထဲ၊ အရိုးတွေထဲ၊
ရိုးတွင်းခြင်ဆီထဲထိ စိမ့်ဝင်ပြန့်နှံ့နေတာပါ။ ခမည်းတော် ဆင်းရဲပင်ပန်းလွန်လှပါတယ်
သားတော်ဘုရား . . .။ သားတော်ဘုရား . . . ရာဟုလာကို ပြန်ပေးပါ။ မင်းဆက်မပြတ်အောင်
ကာကွယ်ပေးပါ့မယ်လို့ သားတော် ကတိပေးထားတာပဲ။ အောက်ထစ်ဆုံး ဒီ ကတိတော့ တည်ပါဦး။
သားတော်ဘုရား . . . ရာဟုလာဟာ ငယ်ပါသေးတယ်။ ခမည်းတော်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ
အားလုံးဟာ သူ့ဆီမှာ ရှိတာပါ။ ရာဟုလာကို ပြန်ပေးပါ။ အို . . . ရာဟုလာကို
ပြန်ပေးပါ”ဟု မင်းကြီးက တိုးလျှိုးတောင်းပန်၏။
သားတော်က ရာဟုလာကို ခေါ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရာဟုလာဟာ သူ့အမေတောင် မသိလိုက်ဘဲ
ထွက်လာခဲ့ပြီး သားတော်ကို မီအောင်လိုက်လာခဲ့တာပါ။ ခမည်းတော် . . . သားတော်က
ခရီးတစ်ခု စထွက်လိုက်ပြီဆိုရင် နောက်ပြန်မလှည့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျောင်းတော်ကို
တန်းပြန်လာခဲ့တာပါ။ သားတော်ဟာ ကလေးတွေကို အဓမ္မ သိမ်းပိုက်ပြီး မိဘတွေ ပူပင်ရအောင်
လုပ်တဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ရာဟုလာဟာ ရဟန္တာအရှင်မြတ် ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အတူ ရှိနေပါတယ်။
ရာဟုလာကို ဘုရား တရား သံဃာဆိုတဲ့ သရဏဂုံ သုံးပါးပဲ ဆောက်တည်ပေးထားလိုက်ဖို့
ရှင်သာရိပုတ္တရာကို သားတော် ပြောထားပါတယ်။ ခမည်းတော် . . . ရာဟုလာကို
ပြန်ခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။ သူအရွယ်ရောက်လို့ သူ့ဆန္ဒအတိုင်း သာသနာ့ဘောင်မှာ ရှင်ရဟန်း
ပြုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ သားတော်အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး ရပ်တည်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ခမည်းတော် . . . မျက်ရည်တွေ သုတ်လိုက်ပါ။ လုပ်ပါ . . . ခမည်းတော်။ ထလိုက်စမ်းပါ”ဟု
ပျော်ရွှင်သွား၏။ ၀တ်ရုံစ အစွန်းတစ်ခုဖြင့် မျက်ရည်သုတ်ရင်း မတ်တတ် ရပ်လိုက်သည်။
သားတော်ဘုရား . . .။ ခမည်းတော်ဖြင့် လန့်ဖျပ်သွားတာပဲ . . .။ ခမည်းတော်
ကျေနပ်နှစ်သက်အောင် လုပ်ပေးတဲ့အတွက် သားတော် ကျန်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်း
ဆုတောင်းပါရစေ သားတော်ဘုရား . . .။ သားတော် . . . ယသောဓရာလည်း သူ့သားအတွက်
ငိုနေရှာတာ။ ရာဟုလာကို ခေါ်ပြီး ပြန်ပါတော့မယ်။ ရာဟုလာကို ခေါ်ပေးပါ သားတော် . . .။”
ရဟန္တာအရှင်မြတ် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ သင်္ကန်းစွန်းကို ဆွဲလျက် လိုက်ပါလာ၏။ မင်းကြီးက
လက်နှစ်ဘက် ဆန့်တန်း၍ ရာဟုလာကို ကြိုလေရာ ရာဟုလာသည် ရှင်သာရိပုတ္တ၏ သင်္ကန်းစကို
လွှတ်ကာ ဘုရားရှင်၏ ညောင်စောင်း နောက်ကွယ်သို့ သွားရောက်၍ ပုန်းလေ၏။
ပြုံးရမလိုလို မဲ့ရမလိုလို ဖြစ်သွားပြီး အကူအညီ တောင်းသည့်အနေဖြင့် ဘုရားရှင်၏
“ရာဟုလာ . . . ငါ့ရှေ့
“ရာဟုလာ . . . ကလေးကို
ရှာမတွေ့လို့ ကလေးအမေ ငိုနေပြီ။ ကလေး . . . ကလေးအမေဆီ သွားလိုက်ပါဦး။
ဘိုးဘိုးကြီးက ကလေးကို လာခေါ်တာ။ လိုက်သွားလိုက်ပါ။ မျက်ရည်တွေ သုတ်လိုက်ပါဦး။”
“ဘဘ ဘုန်းဘုရား . . .။
ဘုန်းဘုရားရဲ့ အရိပ်က အေးချမ်းပါတယ် ဘုရား။ ဘုန်းဘုရားရဲ့ အရိပ်ကို ခိုနေပြီး
ဘုန်းဘုရား ဘယ်သွားသွား ဘုန်းဘုရားရဲ့ လက်ကိုဆွဲပြီး နောက်ကလိုက်နေချင်ပါတယ်
ကလေးကို ကျွေးမွေးပြုစု စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ကလေးအမေရဲ့ အရိပ်က ပိုအေးရမှာ . . .။
ကလေးက ငယ်လွန်းသေးတယ်။ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေ လိုအပ်နေသေးတယ်။”
“ဘဘ . . . သားလည်း
ကလေးလည်း တစ်နေ့နေ့မှာ လူကြီး ဖြစ်လာမှာပေါ့။”
“ဘဘ ဘုန်းဘုရား . . .
ဒါဆိုရင် . . . သား လူကြီးဖြစ်လာတော့ အေးချမ်းတဲ့ ဘုန်းဘုရားရဲ့ အရိပ်ကို
“ရာဟုလာ . . .။
အဲဒါတော့ ကလေးရဲ့ သဘောပေါ့။”
အဘိုးဖြစ်သူ သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီး၏ လက်ကိုဆွဲလျက် လိုက်ပါနေရင်း ဘုရားရှင်ဆီသို့
မကြာခဏ ပြန်လှည့်၍ ကြည့်နေ၏။ ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့် မင်းကြီး၏ လက်ကို ဆွဲကိုင်ထားပြီး
အဝေးမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့သော ဘုရားရှင်ကို ညာဘက်လက်ဖြင့် ဝှေးရမ်းနှုတ်ဆက်လျက် ရှိနေလေ၏။
Portrait of the Buddha (fromaNovelist's Pen) by Jayasena
Jayakody, English Translation by K. D. de Lanerolle. FOR FREE DISTRIPUTION -
ခမည်းတော်မင်းကြီး၊ သာဝကြီး နှစ်ပါးတို့နှင့်အတူ နန်းဆောင်အတွင်းသို့ ၀င်တော်မူ၏။ ပြင်ဆင်ခင်းကျင်းထားသည့် နေရာ၌ ဘုရားရှင် ထိုင်တော်မူပြီးသောအခါ သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးသည် ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ သားငယ်ရာဟုလာနှင့်အတူ ထိုင်နေသည့် ယသောဓရာကို ညွှန်ပြလျက် ဘုရားရှင်အား လျှောက်ထား၏။
. . . သားတော်ဘုရား အနော်မာမြစ်ကမ်းမှာ အ၀ါရောင်သင်္ကန်း ဆင်မြန်းလိုက်ပြီလို့ သတင်းကြားတဲ့နေကစပြီး ဒီနေ့ထိအောင်ပဲ ယသောဓရာဟာ ၀တ်ကောင်းစားလှတွေ မ၀တ်တော့ဘဲ အ၀ါရောင်သင်္ကန်းနဲ့တူတဲ့ ၀တ်ရုံကြမ်းကြမ်းတွေပဲ ၀တ်ပါတော့တယ် ဘုရား . . .။ သားတော်ဘုရား ဝေသာလီမှာ ဒုက္ကရစရိယာ ကျင့်နေပြီလို့ ကြားရတော့လည်း သူက အစာမာတွေ မစားတော့ဘဲ အရည်ကိုသာ သောက်ပါတော့တယ်။ သားတော်ဘုရား အစာပြန်စားပြီလို့ ကြားရတော့မှ သူလည်း အစာပြန်စားတာပါ။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အိပ်ယာနေရာတွေကိုလည်း အသုံးမပြုတော့ပါဘူး။ အမွှေးနံ့သာတွေလည်း မလိမ်းမခြယ်တော့ပါဘူး။ အသားငါးလည်း မစားတော့ပါဘူး။ မှတ်မိပါသေးတယ် သားတော်ဘုရား . . . သူ့ဖခင်က သူ့ကိုပြန်ခေါ်မယ်၊ မင်းသားတစ်ပါးနဲ့ လက်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတုန်းက သူ့ဖခင်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ပြီး ငိုနေရှာတာ . . .။ သားတော် ချန်ထားခဲ့တဲ့ ခြေနင်းတော်အစုံကို ရင်ခွင်မှာ ပွေ့ပိုက်ပြီး ငိုရှာတာ . . .။ အဲဒီ ခြေနင်းတော်ကို သူက မနက်တိုင်း မနက်တိုင်း ပန်းတွေနဲ့ပူဇော်ပြီး ရှိခိုးတာလေ။ သားတော်ကို လွမ်းလွန်းလို့ ခမည်းတော် ပူဆွေးရတယ် ငိုကြွေးရတယ် ဆိုရင်လည်း ခမည်းတော်ကို
သူက နှစ်သိမ့်ရသေးတယ် . . .။ သားတော်အတွက် မပူဆွေးဖို့၊ သားတော်အတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာသာ ပို့သဖို့ ခမည်းတော်ကို သူ သတိပေးရတာလည်း အကြိမ်တစ်ထောင် ဘယ်ကမလဲ။ သားတော် . . . ခုတော့ သားတော်အတွက် ခမည်းတော် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ လူသားတွေအတွက် သားတော်က ကြီးမြတ်တဲ့ စွန့်လွှတ်စွန့်စားမှု ပြုခဲ့တယ်ဆိုရင် ယသောဓရာလို မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ စွန့်လွှတ်အနင့်နာခံမှုဟာလည်း မြင့်မြတ်လှပါပေတယ် သားတော်ဘုရား . . .။”
. . .။ ယသောဓရာ သားတော်ကို ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာဟာ ဒီတစ်ဘ၀တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘ၀များစွာ သံသရာမှာ ယသောဓရာဟာ သားတော်ရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဖက် ဘ၀ဖော်တွေ အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သူဟာ မြင့်မြတ်သူပါ။ သူဟာ ကြီးမြတ်သူပါ။”
အနီး၌ရှိနေသော သားတော်လေး ရာဟုလာသည် ဘုရားရှင်၏ မျက်နှာတော်ကို တစ်ချိန်လုံး ငေးစိုက်ကြည့်နေ၏။ ရာဟုလာသည် တိတ်ဆိတ်ညင်သာစွာ မတ်တတ်ရပ်လိုက်ပြီး ဘုရားရှင်၏ ထံတော်ပါးသို့ တစ်လှမ်းချင်း တိုးသွား၏။ စကား တစ်ခွန်းမျှ မပြောဘဲ ဘုရားရှင်၏ သင်္ကန်းတော်ကို တို့ကိုင်ကြည့်လိုက်ပြီး ဘုရားရှင်၏ ဒူးတော်နှစ်ဘက်ပေါ်၌ လက်တင်ထားလျက် ဘုရားရှင်၏ မျက်နှာတော်ကို မော်ဖူးလိုက်၏။
အလွန်အမင်း ပျော်ရွှင်နေသည်။ သူ ကြောက်လည်းမကြောက်ပေ။ စိတ်ထွေပြားမှုလည်း ကင်းနေ၏။ ဘုရားရှင်နှင့် ပို၍နီးအောင် တိုးကပ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ဘုရားရှင်၏ ဒူးတော်ပေါ် တင်ထားသည့်လက်ဖြင့် ဘုရားရှင်၏ လက်ခလယ်တော်ကို တို့ပုတ်ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲမှာ ပြောနေ၏။
ရာဟုလာ . . . အေးချမ်းတဲ့ ငါ့အရိပ်မှာ ထာဝရ ခိုလှုံချင်တယ်ဆိုရင် ငါလို ရဟန်းပြုရလိမ့်မယ်။ ရဟန်းပြုဖို့ ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်း ကလေးအတွက် လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ ရဟန်းဘ၀ဆိုတာ နန်းတော်ထဲမှာ နေရတာလို သက်တောင့်သက်သာ မရှိဘူး။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ ကြွယ်ဝတာ မဟုတ်ဘူး။ ခမည်းတော် မင်းကြီးကလည်း ကလေးကို ထီးရိုက်နန်းရာ လွှဲအပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေတယ်။ ခမည်းတော် မင်းကြီးဆီက ထီးမွေနန်းမွေကို ခံယူမလား၊ ငါ့ဆီက ဓမ္မအမွေကို ခံယူမလားဆိုတာ ကလေး အရွယ်ရောက်မှပဲ ကလေး ကိုယ်တိုင် ရွေးခြယ်ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ ဓမ္မအမွေကို ခံယူမယ်ဆိုရင်တော့ လေ့လာသင်ယူစရာတွေ အများကြီး မရှိပါဘူး။ ကျင့်ကြံစရာတွေကလည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတွေပါပဲ။ ထီးနန်းအမွေ ခံယူပြီး တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ အများကြီး လေ့လာရလိမ့်မယ်။ တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုး သည်ပိုးထမ်းရွက်တဲ့ နေရာမှာလည်း ပြုဖွယ်ကိစ္စတွေ အများကြီး ရှိလိမ့်မယ်။”
ဘုရားရှင်ကို စကားတုံ့ပြန်ခြင်း မရှိဘဲ ဘုရားရှင်၏ မျက်နှာတော်ကို ငေးလျက်သာ ငြိမ်သက်စွာ နားထောင်နေ၏။ ဘုရားရှင်က ဆက်လက်၍ မိန့်တော်မူ၏။
. . . ကလေးက ငယ်သေးတော့ မင်းတို့ကျင့်ဝတ် ဆယ်မျိုးကို သိမယ်မထင်ဘူး။ ထီးနန်းအမွေ ခံယူတယ်ဆိုရင် ကျင့်သုံးတတ်အောင် မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့ရဲ့ အကျင့်ဆယ်မျိုးကို မှတ်သားထားပါ။ မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့ဟာ ဒါနကျင့်ဝတ်ကို ကျင့်သုံးကြတယ်။ ရဟန်းပုဏ္ဏား သူတော်စင်တွေကို လှူဒါန်းကြတယ်။ ပရိစ္စာဂကျင့်ဝတ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့ အနေနဲ့ အမှုထမ်းတွေကို လစာရိက္ခာ လုံလုံလောက်လောက် ပေးကြတယ်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ပြည်သူတွေကိုလည်း ပေးကမ်းထောက်ပံ့ကြတယ်။ သီလ ဆောက်တည်ပြီးတော့ သီလကျင့်ဝတ်ကို ကျင့်သုံးကြတယ်။ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်း အဇ္ဇ၀ကျင့်ဝတ်ကို ကျင့်သုံးကြတယ်။ အပြောအဆို အပြုအမူ သိမ်မွေ့ခြင်း မဒ္ဒ၀ကျင့်ဝတ်ကို ကျင့်သုံးကြတယ်။ အခါအားလျော်စွာ ဥပုသ်သီတင်း ဆောက်တည်ပြီးတော့ တပကျင့်ဝတ်ကို ကျင့်သုံးကြတယ်။ အမျက်ဒေါသ မထွက်ဘဲ အက္ကောဓကျင့်ဝတ်ကို ကျင့်သုံးကြတယ်။ အ၀ိဟိံသန ကျင့်ဝတ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့ အနေနဲ့ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူတွေကို မနှိပ်စက်ကြဘူး။ မညှင်းဆဲကြဘူး။ သည်းခံခြင်း ခန္တီကျင့်ဝတ်ကို ဖြည့်ဆည်းကြတယ်။ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို မဆန့်ကျင်ကြဘူး။ ဒါကတော့ အ၀ိရောဓန ကျင့်ဝတ်ပဲ။ ကလေးအနေနဲ့ ကျင့်ဝတ်ဆယ်မျိုးကို မှတ်သားဖို့ ခက်တယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အ၀ိရောဓန ကျင့်ဝတ်ကိုပဲ မှတ်သားထားပါ။ အ၀ိရောဓန ကျင့်ဝတ်ကို ကျင့်နိုင်တယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုပါ ကျင့်သုံးပြီးသား
ရာဟုလာ . . . မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့ဟာ ရဟန်း ရှင် လူ ပြည်သူတွေ လှုပ်လှုပ်ရွရွ မဖြစ်ရလေအောင်၊ တိုင်းနိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်၊ နေပြည်တော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားအောင် စီမံပေးတတ်ကြတယ်။ နေပြည်တော်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာ အကြမ်းမဖက်ကြဘူး။ ရာဇပရိယာယ် ကြွယ်ကြွယ်နဲ့ ပြည်သူတွေ ကိုယ့်ဘက်ပါအောင် သွေးဆောင်စည်းရုံး သိမ်းသွင်းနိုင်ကြတယ်။ ကြက်သားအုပ်မကြီးက ကြက်ကလေးတွေကို ရင်အုပ်မကွာ ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်သလို တိုင်းသူပြည်သားတွေကို အကြင်နာနဲ့ ဖိစီးပြီး အုပ်ချုပ်ကြတယ်။ ရှေးမင်းတွေရဲ့ ကျင့်ထုံးဟောင်း၊ လုပ်နည်းကောင်းတွေကို ကျင့်သုံးကြတယ်။ ရှေးကနည်းကောင်းတွေကို မပယ်ကြဘူး။ အခွန်အတုပ်လည်း အများကြီး မကောက်ကြဘူး။ ပြည်သူတွေ ပူပန်အောင် နှိပ်စက်တဲ့ အာဏာရှင်ဆိုးကြီးတွေ မဟုတ်ကြဘူး။ ပြည်သူကို သနားကြင်နာကြတယ်။
. . . ကောင်းကင်မှာ သာနေတဲ့ တိမ်စင်လမင်းကြီးဟာ လောကကြီး အပေါ်မှာ အေးမြတဲ့
အလင်းဓာတ်တွေ ဖြန့်ချပေးနေတယ်။ လမင်းကြီးဟာ နေလို မပူဘူး။ အေးမြတယ်။ ကြယ်တွေရံတဲ့ လမင်းကြီးဟာ ကျက်သရေရှိတယ်။ အလားတူပဲ မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့ဟာလည်း တိုင်းနေပြည်တော် အပေါ်မှာ လမင်းလိုကျင့်ကြတယ်။ ကြယ်ရံတိမ်စင် လမင်းကြီး တင့်တယ်သလို မတ်ပေါင်းရံတဲ့ မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေဟာ တင့်တယ်ကြတယ်။ တိုင်းပြည်ကို ပွင့်လင်းစေကြတယ်။ စည်ပင်ကြီးပွားစေကြတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထောင်ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ပြီး ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့ မထားကြဘူး။ တိုင်းတစ်ပါးမင်းတို့ရဲ့ ၀ိုင်းပယ်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ငြင်းပယ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုလည်း မခံကြရဘူး။ ပြည်သူလူထုကရော ကမ္ဘာ့လူထုကပါ ‘ကောင်းလေစွ၊ ကောင်းလေစွ၊ ကောင်းလေစွ’လို့ ချီးကျူးထောမနာ အပြုခံရကြတယ်။
. . . မှတ်သားစရာတွေ များနေပြီလား။ လိုရင်းမှတ်ဖို့က လွယ်ပါတယ်။ တိုင်းသားပြည်သူ ရဟန်းရှင်လူတွေကို ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ သနားကြင်နာဖို့နဲ့ တိုင်းသားပြည်သူ ရဟန်းရှင်လူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပါပဲ။”
ရာဟုလာသည် စိတ်ဝင်တစား နားထောင်နေ၏။ ယသောဓရာလည်း နှစ်ထောင်းအားရစွာ နားထောင်လျက်ရှိနေသည်။ သုဒ္ဓေါဒန မင်းကြီးကား ဘုရားရှင်၏ စကားဝါကျ တစ်ခုတစ်ခု ဆုံးတိုင်းဆုံးတိုင်း ခေါင်းတညိတ်ညိတ် ရှိနေလေတော့၏။
ရဟန်းလူကို၊ သိမ်းမြန်းပိုက်ထုပ်၊ ကြက်သားအုပ်သို့၊ မလှုပ်စေကြောင်း၊ ဖြည့်ဖြားယောင်းလျက်၊ ကျင့်ဟောင်းမလွန်၊ တုတ်ခွန်မပြင်း၊ သနားခြင်းဖြင့်၊ နှိပ်နင်းကလူ၊ မပူစေရ၊ ကွပ်ဆုံးမလျက်၊ ထွန်းပပြောင်ပြောင်၊ မိုးထက်ခေါင်နှိုက်၊ အရောင်ချမ်းလွန်၊ လဗိမာန်လျှင်၊ ပူပန်မရှိ၊ ငြိမ်းလေဘိသို့၊ ကြယ်တိရံကာ၊ တင့်တယ်စွာသား၊ ပမာပုံသင့်၊ လနှယ်ကျင့်၍၊ လင်းပွင့်တိုင်းကား၊ စည်ပင်ပွားလျက်။ ။ လူများကောင်းချီးတွန်စေမင်း။"
of the Buddha (fromaNovelist's Pen) by Jayasena Jayakody, English Translation by K. D. de Lanerolle. FOR FREE DISTRIPUTION - NOT FOR SALE.
Picture from (12 May 2011): http://www.osnatfineart.com/ ဆက်ဖတ်ရန်
. . . မင့်ဖေဖေပေါ့။ ဒီမှာ မင့်ဖေဖေ။ သား လာလာ။ သား မြင်ရအောင် သားကို မေမေ ပွေ့ထားမယ်။ ကြည့်စမ်း။ သား မြင်လား။ အ၀ါရောင် အတန်းရှည်ကြီးရဲ့ ရှေ့ဆုံးကနေ လျှောက်လာနေတာ မင့် ဖေဖေပဲ။ အဲဒါ မင့်ဖေဖေပဲ။”
ယသောဓရာသည် ကလေးတစ်ယောက်ကဲ့သို့ ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေ၏။ “မေမေ . . . သားဖေဖေ ဘုန်းဘုရားက သားတို့ကို လာတွေ့တာလား။”
အနှောင်အတွယ်မဲ့၍ ကြည်လင်ချမ်းမြေ့သော ဘုရားရှင်၏ မျက်နှာတော်ကို ယသောဓရာ မြင်နေရ၏။ ရာပေါင်းများစွာသော ရဟန်းတော်တို့ ဘုရားရှင်၏ နောက်တော်ပါးမှ လိုက်ပါလျက် ရှိနေသော်လည်း မည်သည့်ရဟန်းတော်ကိုမှ ယသောဓရာ မကြည့်ပေ။ ယသောဓရာ မြတ်နိုးခဲ့ရသော ယခုတိုင်လည်း မြတ်နိုးရဆဲဖြစ်သော လမ်းမတလျှောက် လျှောက်လာနေသည့် ဤ ယောက်ျားမြတ် နန်းတော်တွင်းသို့ ၀င်လေရာ ယသောဓရာ၏ မြင်ကွင်းမှ ပျောက်ကွယ်သွားစဉ် ယသောဓရာ၏ ရင်ဝယ် ရုတ်တရက် စူးစူးရှရှ ဆို့ဆို့နင့်နင့် ခံစားလိုက်ရ၏။ ယသောဓရာသည် နာကျင်သည့် ရင်တွင်းဝေဒနာ ပြင်းလွန်းသည်ဖြစ်၍ သားတော်လေးကို ပွေ့လျက်နှင့် ပုံလျက်သား လဲကျသွားပြီး ရှိုက်ကြီးတငင် ကျယ်လောင်စွာ ငိုလေ၏။
သားငယ်လေး ရာဟုလာသည် မိခင်၏ ပါးပြင်ပေါ်မှ မျက်ရည်များကို သုပ်ပေးနေရင်း မိခင်ကို နှစ်သိမ့်နေ၏။ “မေမေ . . .။ ဘာလို့ ငိုတာလဲ . . .။”
မျက်လုံးတို့၌လည်း မျက်ရည်များ ပြည့်လျှမ်းလာ၏။ သူ့အသက်ထက် ပို၍ပင် တွယ်တာခုံမင် ချစ်ခင်ရသူ မိခင်၏ သောကကို ကူးယူ ခံစားလိုက်ရ၍ ရာဟုလာလည်း ငိုလေ၏။ ရာဟုလာ၏ ပါးပြင်တို့၌ မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် စီးကျလျက် ရှိနေသည်။
. . . ဒီသောကကို မေမေ မျိုသိပ်ခဲ့ရတာ ခုနစ်နစ် ရှိပြီ . . . ။ . . . မင့်ဖေဖေ ပြန်လာပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာနေဖို့ ပြန်လာတာ မဟုတ်ဘူး။ သားရယ် . . .
သူက မေမေတို့ကို ထားခဲ့ပြီး ပြန်ထွက်သွားအုံးမှာ . . .။ အဲဒါကြောင့် မေမေ ငိုမိတာ . . .။”
အိပ်ခန်းဆောင်သို့ ၀င်လိုက်ပြီး အိပ်ယာထဲ၌ သားလေးရာဟုလာကို ပွေ့ပိုက်ထားရင်း ငိုနေ၏။ ယသောဓရာ၏ အိပ်ခန်းထဲသို့ ကျွန်မ ခုဇ္ဇုတ္တရာ အပြေးအလွှား ၀င်ရောက်လာသည်။
အိပ်ယာထဲမှ ခုန်ထွက်လိုက်ပြီး မျက်ရည်သုတ်ကာ ရာဟုလာကိုပင် မေ့ထားခဲ့ပြီး အရူးမ တစ်ယောက်ကဲ့သို့ အောက်ထပ်သို့ ဆင်းပြေး၏။ ထို့နောက် တံခါးဝ၌ ရပ်လျက် နန်းရှေ့ကွင်းပြင်ဆီ ငေးမျှော်ကြည့်နေ၏။
. . . သူပဲ။ မိယသော်နဲ့ မတွေ့တာ ခုနစ်နှစ် ကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူပဲ။ မိယသော် အသက်ထက် ပိုပြီးတော့ ချစ်ခဲ့ရတဲ့ သူပဲ။ သဲဖြူခင်းထားတဲ့ နန်းရှေ့ကွင်းပြင်ကို သူ ဖြတ်လျှောက်လာနေပြီ။ သူ့မျက်နှာဟာ ဆီးနှင်းတိမ်တိုက်ထဲက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ လမင်းကြီးလိုပါပဲလား . . .။”
ယသောဓရာသည် အ၀ါရောင် ၀တ်ရုံကို ၀တ်ဆင်ထား၏။ အပေါ်ရုံ စုလျားကိုကား မခြုံမိခဲ့ပေ။ ကြီးမားနက်ရှိုင်းသည့် ဂေဟဿိတ သံယောဇဉ်ကြောင့် အရူးတစ်ပိုင်း ဖြစ်နေသူ ယသောဓရာသည် ကွင်းပြင်ကို ဖြတ်၍ ဘုရားရှင်ထံသို့ ပြေးလေ၏။ နောက်ဆုံး၌ လက်ခြေပြတ်သည့် တွားသွားသတ္တ၀ါ တစ်ကောင်ကဲ့သို့ ဘုရားရှင်၏ ရှေ့တော်မှောက်၌ လဲကျသွားပြီး ဘုရားရှင်၏ ခြေတော်အစုံကို နမ်းရှုပ်နေလေ၏။
ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့် ရှင်မောဂ္ဂလာန်တို့သည် ဘုရားရှင်၏ နောက်တော်ပါးမှာ ရှိနေကြ၏။ သုဒ္ဓေါဒန မင်းကြီးသည် ဘေးမှာ ရှိနေ၏။ အစပထမ၌ ရာဟုလာကလေးသည် ဘုရားရှင်၏ ထံတော်ပါးသို့ ချဉ်းကပ်ရန် ကြောက်ရွံ့နေ၏။ သို့သော် ဘုရားရှင်၏ မျက်နှာတော်ကို အတန်ကြာအောင် ငေးကြည့်နေရင်း အကြောက်ပြေသွားပြီး မြေပြင်ပေါ်၌ ငိုနေသည့် မိခင်ထံသို့ သွားကာ နှလုံးခုန်ချက် မြန်လွန်း၍ တုန်တုန်ခိုက်ခိုက် ဖြစ်နေသော မိခင်၏ကိုယ်ကို သိမ်းကြုံးပွေ့ဖက်ရင်း ကျောပြင်ကို ပုတ်ပေးနေလေ၏။
စကားတစ်ခွန်းမှ မဆိုနိုင်သေးပေ။ သူ့အရှင်၏ ခြေတော်အစုံပေါ်၌ ဦးခေါင်းထိုးချလျက် တသိမ့်သိမ့် ငိုရှိုက်နေလေသည်။ ခြေတော်ရင်း၌ အတန်ကြာအောင်ပင် ငိုကြွေးနေလေရာ အရှင်၏ ခြေတော်အစုံသည် ယသောဓရာ၏ မျက်ရည်တို့ဖြင့် ရွှဲရွှဲစိုလာ၏။ “အရှင်
. . . အို သခင် . . .။ မိယသော်ရဲ့ သိမ်မွေ့တဲ့ နှလုံးသားကို နှစ်သိမ့်ပေးဖို့ စကားပြောပါဦး . . .။ မိယသော် . . . ခုနစ်နှစ်လုံးလုံး သည်းခံစိတ်နဲ့ နေခဲ့ရတာပါ။ မိယသော်ဟာလေ အိပ်မက်တွေထဲမှာပဲ ငိုကြွေးနိုင်ခဲ့တဲ့ သူပါ။ အရှင့်ရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေ အောင်မြင်ပါစေလို့ အချိန်တိုင်း အချိန်တိုင်း ဆုတောင်းပေးနေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် သခင် . . .။ ခုနစ်နှစ်လုံးလုံး သည်းခံနိုင်ခဲ့တဲ့ မိယသော်ဟာ အရှင့်မျက်နှာ မြင်လိုက်ရတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါဘူး
. . . လောကသားတွေကို ကယ်တင်အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ လောကီစည်းစိမ်တွေ အားလုံးကို စွန့်လွှတ်ရဲခဲ့တဲ့ ငါဟာ ငါနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ ဒဏ်ကို ခံနိုင်ဖို့ ငါနဲ့ထပ်တူ သတ္တိတွေရှိခဲ့ပြီး ငါ့ကိုလည်း အားပေးခဲ့တဲ့ မင့်ကို ချီးမွမ်းဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး။ မင့်ရဲ့ သတ္တိကို ချီးကျူးပါတယ်။ ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
သားတော်ရာဟုလာ . . . မိခင်ကြီးကို ထူမပေးလိုက်ပါ။ နန်းဆောင်ထဲ သွားမယ်။”
ခြေတော်အစုံပေါ်၌ ရှိနေဆဲဖြစ်သော ယသောဓရာသည် ရွှန်းလဲ့တောက်ပသွား၏။ သူ့မျက်နှာ ပီတိဖြာသွား၏။ သူမျှော်လင့်ခဲ့သော ဂုဏ်ပြုစကားကို ကြားရလိုက်ပြီဖြစ်၏။ သူ့မျက်ရည်တို့ ခြောက်သွားလေပြီ။ သူလည်း အသိ ပြန်ဝင်လာပြီး သူ့မျက်နှာကို ဘုရားရှင်၏ ခြေတော်မှ ခွာကာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်၏။ အနည်းငယ် ရှက်ရွံ့နေဟန်တူသည်။ သူ့အနားမှာ ရှိနေသည့် သားလေးရာဟုလာကို မှီထားရင် မြေပြင်ကို ငေးစိုက်၍ ကြည့်နေလေ၏။